Gịnị Bụ Forex (FX) Trading? - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeForex SchoolGịnị Bụ Forex (FX) Trading?
Anyị niile na-na a nri abalị party ebe mere aha Forex ego n'anya baffled anya. Ọtụtụ ndị na-amaghị ihe Forex bụ ma ọ bụ otú ọ na-arụ ọrụ ma na ọ na-eme ka ọtụtụ mmalite Forex ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu Forex bụ banyere erekwa mba ọzọ ego, ọtụtụ ndị mmadụ ga-eche ma ọ bụrụ na nwere ihe ọ bụla na-eme na inyerịta ego na a mba ọzọ mgbanwe ụlọ ndò na ọdụ ụgbọelu ma ọ bụ akụ (lee eserese n'okpuru). Ozugbo ị na-aghọta ihe na-eme ka ndị a na ahịa na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịkọwa onwe gị na a nri abalị ọzọ, na mma ma, i nwere ike ịghọ a ọma ozu ahia.
Forex (ma ọ bụ FX) Bụ acronym maka mba ọzọ mgbanwe ahịa ma ọ bụ ego ahịa, ebe ego si mba dị iche iche na-kpọrọ na gbanwere. Otu onye ma ọ alụmdi aka ekedep otu akwụkwọ ego na akanyam ọzọ na a n'otu oge azụmahịa. Ego trading mgbe niile emee ụzọ abụọ ebe otu akwụkwọ ego na-ere ọzọ na-anọchi anya na ndị na-esonụ notation: EUR / USD ma ọ bụ USD / JPY. The ọnụego mgbanwe kpebisiri ike site ọkọnọ na ina.
Gịnị kpọmkwem bụ ahịa Na Forex?
Ọ bụghị akwụkwọ akwụkwọ ma ọ bụ ihe onwunwe. Ọ bụ oyi siri ike ego. N'ikwu ya n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ nkeji data nke na-anọchi anya ego ego. Otú ọ dị, ọ bụghị otu ego ị na-azụ ma ọ bụ ire, kama ị na-ere ego otu mba megide ibe ya. Mmekọrịta mmekọrịta pụrụ iche a na-ere ahịa na abụọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịzụta Euro na Dollar, ma si otú a ị nwere ike ịzụta otu ụzọ USD / USD nke na-anọchite anya ego ole dollar US na Euro bara. E nwere ọtụtụ narị ego n'ụwa nile (ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịmegharị), ma e nwere ọtụtụ isi ego na abụọ nke na-akọrọ maka ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke Forex:
Isi Iyi: Bank for International Settlements (BIS)
triennial nnyocha e mere (www.bis.org)
Ụdị Of Forex Markets
The atọ nwere ahịa nke a Forex ọṅụ na ahia ego bụ: ntụpọ ahịa, ego futures ahịa, na ego na-atụ ahịa.
The ntụpọ ahịa bụ ugbu a ndị kasị ibu ahịa maka mgbanwe. The ntụpọ Forex ahịa bụ ebe ego na-zụta na-ere n'otu ntabi na ha ugbu a price na kwetara-n'isi ọnụego mgbanwe. Mkparịta ụka a na-a facilitated site ma site a ore ma ọ bụ a akụ, na ọtụtụ n'ime anyị retail ahịa ga na-ahia na ntụpọ ahịa.
Na a typical ntụpọ retail azụmahịa, anyị ga-ahụ ugbu a ọnụego mgbanwe nke EUR / USD, nke e kwuru na anyị ore dị ka 1.4213 jụọ ọnụahịa, dịka ọmụmaatụ. Anyị ga-azụ ahịa na 1000 ahịa ya (1 micro lot) n'otu ntabi anya na ọnụahịa ịrịọ a jụrụ site na bọtịnụ nke bọtịnụ, maọbụ obere mgbasa ma ọ bụ ụgwọ ọrụ, wee ree ya nkeji oge maka uru ma ọ bụ ọnwụ, gbakọọ na pips dollar. Anyị nwere ike ịnwe $ 1000 naanị na akaụntụ anyị, mana n'ihi na ọ bụ ihe kpatara ya ore na-enye anyị 100: 1 leverage, anyị na mkpa $ 10 oke na anyị na akaụntụ ahia na $ 1000 unit size.
na ego futures ahịa, Contracts na-zụta na-ere dabeere na n'elu a ọkọlọtọ size (ọtụtụ ibu karịa ntụpọ Forex) na mmezi ụbọchị n'ihu ọha na onu ahia ahịa. Investors ekweta ịzụta ma ọ bụ na-ere a ofu ego nke a kpọmkwem ego na a ofu ọnụego mgbanwe na a ofu ụbọchị na-eme n'ọdịnihu.
The ego n'ihu ahịa ndị yiri ego futures ahịa na ihe dị iche n'etiti ha ịbụ na okwu ahụ nke nkwekọrịta n'etiti abụọ ọzọ kpebisiri ike nanị ndị ọzọ aka na-adịghị na-dabere na a ọha onu ahia ahịa.
Olee Ebe Abù Forex ahịa?
Forex adịghị a anụ ahụ site, ya bụ, ọ dịghị nnukwu ụlọ dị ka New York Stock Exchange on Wall Street ma ọ bụ na Chicago Board of Trade na Chicago ebe a ụyọkọ ndị mmadụ n'ala ma ọ bụ "n'olulu" iti mkpu ma ọ bụ n'aka-mgbaama ma ọ bụ waive dollar ego na-eduzi azụmahịa. Kama, Forex arụ ọrụ electronically na retail anya-exchange mba ọzọ ego ahịa na-agba ọsọ kpamkpam site a na-aga n'ihu na netwọk nke bịara n'ikperé mmiri na agbanwe.
N'ihi na ego ahịa bụ a decentralized ahịa ọsọ electronically, e nwere dapụtara uru. Forex ahịa ike ahia n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla site na internet. Ọ na-adịghị ga-amalite na-akwụsị ụbọchị dabeere na awa nke a akpan akpan ụlọ ma ọ bụ akụ dị na a akpan akpan oge mpaghara. Kama, ọ bụ 24 hour trading, 5.5 ụbọchị n'izu, n'ihi na e nwere mgbe niile dị iche iche mmiri na-arụ ọrụ na àjà udu dị iche iche ebe na oge zones gburugburu ụwa. N'ihi na nke ya oke liquidity na internet dabeere n'elu ikpo okwu (dịghị mgbanwe, ọ dịghị open-mkpu ákwá olulu, dịghị n'ala agbanwe), ngwa-ngwa-iji egbu na ntabi-rijuru afọ nkwenye na-eme.
Ònye hapụrụ Forex?
Na n'elu $ 4 puku ijeri kwa trading olu, Forex bụ kasị ahịa na ụwa, ọtụtụ ugboro ibu karịa ụwa nile ngwaahịa na futures ahịa jikọtara. Ogologo oge gara aga na ọ bụ nanị domain nke mega ọgaranya, mmiri eziga ego gburugburu ụwa, corporations hedging ha n'ebe ego n'ihe ize ndụ na mba dị iche iche ma ọ bụ n'ịtụgharị ha uru, Central anoghi n'ulo oba ebugharị mba aku ihe mgbaru ọsọ site ego iwu, na ijeri dollar oke ego agbalị inweta uru site ahịa. Otu nnukwu egwuregwu ka nkejikotara nnukwu nke trading olu, ma n'oge na-adịbeghị ihe ntecha na ebumnobi agbanweela.
The deregulation nke 1990s, tinyere ọhụrụ internet dabeere teknụzụ, ada agbanwe na-etolite ọdọ mmiri nke liquidity anyị obere ahịa na-nwere ohere na nnukwu ada ohere Forex. Ahịa nnukwu na obere e-eto eto na nọmba na olu iji na-uru nke obere fluctuations n'ọnọdụ udu maka nzube nke ntule na uru.
Forex bụ na-akpali akpali ahịa na-anọchi si niile ndị ọzọ bụ maka ọtụtụ ihe:
The kasị mmiri mmiri nke niile Investment ahịa (ihe karịrị $ 4 puku ijeri ahịa kwa ụbọchị)
Ikike ahia n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla site na internet
Ozugbo ahia egbu na kacha nta slippage
24 hour trading, 5.5 ụbọchị n'izu. Sunday mgbede site n'ehihie Friday.
The ahịa enweghị ike jụrụ ma ọ bụ mma site ibu sonyere
The ike na-uru na-ebili na-ada ada ahịa
Mgbanwe leverage na ọtụtụ trading na ala oke chọrọ
Hedging nhọrọ: i nwere ike jide ogologo na obere ọnọdụ na otu ego
Kasị agbanwe iwu agbasa naanị, ọ bụghị ọrụ
Onye ọ bụla n'ime ihe ndị a n'onwe ya na-eme ka Forex ndị ọzọ mara mma karịa ndị ọzọ na ahịa, na jikọtara ọnụ, ọ dịghị zoo: Forex enye ọzọ ohere karịa ndị ọzọ ahịa na ọtụtụ ala amalite ichekwa na-akwụ ụgwọ. Ndị a uru na-gosiri ọzọ n'ụzọ doro anya na anyị ngalaba a na-akpọ FX Uru n'elu Ebuka na Futures.
All ndị a uru na-apụtaghị na Forex bụ a cakewalk, n'ebe dị anya site na ya. ezie na Forex trading gburugburu ebe obibi nwere ike inwe uru karịa ndị ọzọ, ahịa niile dị ize ndụ maka ndị ahịa niile, karịsịa maka ndị ahịa na-enweghị uche, na atụghị anya abụghị otu. N'ezie, e nwere ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi tụfuo karịa ka ị ga-enwe ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ịbanye na ya adịghị njikere, égbè na-enwu na ezigbo ego, dịrị njikere ịkwụsị ego gị n'ụzọ dị mkpirikpi. Ebe nchekwa nke Forex jupụtara na foduru nke ndị ahịa na-enweghị uche ndị ndị ahụ nwere ahụmahụ riri.
Anyị na-enye ndị dị na nke a agụmakwụkwọ ngalaba na ebumnuche na ogwe aka ị na ihe ọmụma, Atụmatụ, na azum na-enyere gị ịga nke ọma na trading Forex. Ọ na-ruo gị na-oge na-amụta ihe niile i nwere ike na hone gị trading nkà na usoro ke ngosi akaụntụ na mebere ego. Naanị mgbe unu juputara nwalere gị ihe ọmụma, nkà, na usoro na demo trading i kwesịrị iputa ahia n'ezie akaụntụ, na, ọbụna mgbe ahụ, ọ bụ ihe amamihe ahia na ndị kasị nta na ọtụtụ size. E nwere ịrịba ụgwọ ọrụ dị na a ahịa - ma ọ bụghị na-enweghị ha na-eje ozi ihe ize ndụ, na ihe ị na-amụta na-eme mma gị Ohere nke ndụ na Irite Uru.
Gịnị kpọmkwem bụ ahịa na Forex
Gịnị Bụ Forex
Gịnị Bụ Forex Trading
Ebe a na-Abù Forex ahịa